Kunyorera - Bulltech
Kudhinda kwe3D kunogona kupa vashandisi zvikamu zvekupedzisira mumazuva mashoma chete kuti vaongorore dhizaini yekugadzira, kana kuzviisa zvakananga mukushandisa, uye zvakare kuita nguva yekutengesa nekukurumidza kupfuura vakwikwidzi. 3D yekudhinda tekinoroji inoita basa rakakosha kwazvo mukugadzirwa. Inogona kukurumidza kuwana chigadzirwa chigadzirwa, uye wozoshandisa iyo modhi yekukurumidza kugadzira. Maitiro acho anoshanduka-shanduka uye anoshanda, zvinobudirira kunodzora mutengo wekuumba pamwe nekugadzira tsvina, tora zvigadzirwa munguva pfupi kwazvo, uchiwana mukana wekuwedzera.
Diki Batch Kugadzira
3D kudhinda diki batch kugadzirwa kune zvakawanda zvakanakira: kukwirira kuchinjika, kutsanya kudhinda, yakaderera mutengo, yakakwira kunyatsoita, uye yakanaka yepamusoro mhando. Iyo inonyanya kukodzera kudiki batch kugadzirwa kwezvigadzirwa senge hunyanzvi, hunhu hwetsika, firimu uye terevhizheni kuchangamuka, uye zviridzwa zvikamu. Inokunda matambudziko emutengo wakaderera, kushanda kwakaderera, uye hunhu husina kugadzikana hunokonzerwa nekugadzirwa kwetsika senge bhuku remabhuku, CNC, jekiseni kuumbwa.
3D printer inogona kuwana kukurumidza prototyping iyo inoshandiswa pakuonekwa kwechitarisiko, izvi zvakakosha mumatanho ekutanga eindasitiri yechigadzirwa dhizaini. Kuisa data re3D muprinta ye3D kunogona kunyatso kudhinda matatu-matatu emhando yechigadzirwa, zvichiita kuti dhizaini iwedzere kujeka. 3D yekudhinda tekinoroji inoderedza zvakanyanya iyo yekugadzira nguva, kusiyana neyechinyakare yakavhurika-chakuvhuvhu kugadzira kana ruoko-yakagadzirwa, inogona nekukurumidza uye zvinobudirira kubatsira makambani kuwana chigadzirwa dhizaini dhizaina pakutanga danho.
Kugadzirwa kwekugadzira kunosanganisira kuongorora kweungano uye kuongorora kwebasa. Inogona kukurumidza kuongorora chimiro chechigadzirwa kuti uone kana dhizaini yechigadzirwa inonzwisisika uye kana bvunzo inoshanda ingakwanise izvo chaizvo zvinodiwa zvechigadzirwa. Iko kushandiswa kweiyo 3D yekudhinda tekinoroji inogona mhanyisa chigadzirwa kuvandudza kutenderera uye kudzivisa matambudziko enguva refu uye yakakwira mutengo nekuda kwekuumbwa kwekuvhura.
Mune echinyakare nzira dzekugadzira, iko kudyara uye kuvandudza kweforoma kune mutengo wakakwira kwazvo kumabhizinesi, uye kubuda kweiyo 3D kudhinda tekinoroji kunounza mapfupi kune indasitiri yekushandisa pamba. Kubudikidza ne3D kudhinda nekukurumidza prototyping, maR & D mainjiniya anogona kukurumidza kushandura matatu-mativi emhando yedhata yakagadzirwa nekombuta kuita chinhu chaicho. Maitiro aya anokurumidza kakapetwa kagumi kupfuura echinyakare nzira dzekugadzira. 3D yekudhinda tekinoroji inowanzo shandiswa kuchigadzirwa proofing mune chigadzirwa chigadzirwa nhanho, senge chitarisiko ongororo, gungano ongororo, uye diki batch mangoda kugadzirwa. Iyo inoderedza muforoma mutengo mukati meyese nzira yekugadzira, inopfupisa chigadzirwa kuvandudza nguva uye inomhanyisa kumhanya kwechitsva chigadzirwa chigadzirwa. Nekuvandudzwa kwemidziyo yezvinhu uye kuvandudzwa kweiyo 3D yekudhinda tekinoroji, 3D yekudhinda tekinoroji ichave ichiwedzera uye kuwedzera kugadzirwa kwezvikamu zvekupedzisira zvemidziyo yemumba. Mune ramangwana, 3D tekinoroji yekudhinda inokura kune yakakura zvigadzirwa.
Kudhinda kwe3D kunopa mhinduro yakanakisa yePrecision Mushonga. 3D yekudhinda tekinoroji inogona kugadzira matatu-mativi modhi zvichibva pane yemurwere CT kana MRI dhata, uye wozodhinda iyo kesi modhi kuburikidza neiyo 3D purinda, uye nekukurumidza uwane yekurapa modhi munguva pfupi pfupi. Iyo inoshandiswa mune yekuongorora kana magwara ekuvhiya kuzadzisa chinangwa chekuona dhizaini, mashandiro mashoma ekuvhiya, kumisikidza kwakazvimiririra uye kurapwa chaiko. 3D yekudhinda tekinoroji inopa vanachiremba neinonzwisisika uye yakazara preoperative kuronga uye yekuvhiya simulation, iyo inokwidziridza kururamisa kwekuvhiya uye zvinobudirira kunoderedza njodzi yekuvhiyiwa. Uye zvakare, kukosha kweanorapa 3D maprinta eiyo orthopedic insoles, bionic maoko, ekunzwa zvinobatsira uye zvimwe zvekumisikidza michina haina kungogadziriswa chete, asi zvakare zvinonyanya kuratidzwa mukutsiva kwetsika nzira dzekugadzira neyakajeka uye hunobudirira dijitari yekugadzira tekinoroji, iyo inonyanya kupfupisa iyo kugadzirwa kutenderera uye inovimbisa kuwana zvigadzirwa munguva ipfupi nguva.
Smart typetting. A 3D kudhinda akangwara data system yakanyatsogadziriswa dentistry, iyo inosanganisa otomatiki kuseta uye nekuwedzera mabasa ekutsigira, otomatiki layering, inotsigira Wifi kufambisa mafaira, uye inogona kutsigira akawanda 3D maprinta panguva imwe chete;
Yakagadzirwa dhizaini. Iyo Bulltech yakateedzana ye3D yekudhinda masisitimu ane diki diki, yakapusa mashandiro uye yakakwira inochinjika, yakakodzera kune chero basa rebasa;
Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Iyo yakazvimiririra yekuchenesa uye kurapa sisitimu inorerutsa mashandiro ebasa zvakanyanya sezvinobvira kubva kunhonga nekuisa iyo yekudhinda pallet, iko kuchengetwa kweiyo resin vat uye kuchenesa kwemasara, ayo anoshanda zvakanyanya uye ane zvakatipoteredza ane hushamwari.
Zadzisa dhijitari mhinduro. Kubva kuCAD dhizaini kuenda ku 3D kudhinda zvakapedza zvigadzirwa, Bulltech ine yakakwana serie ye3D yekudhinda mhinduro, ine chinangwa chekushandisa yehunyanzvi 3D yekudhinda tekinoroji kushandura mazino ekugadzirisa nzira, kutsanangura maitiro ekushandisa edhijitari 3D kudhinda mune mazino, uye kuzadzisa akanakisa mhedzisiro anotarisirwa.
Iko kushandiswa kwe 3D kudhinda tekinoroji mune shangu dhizaini, kutsvagisa uye kuvandudza, uye kukanda kugadzirwa kwakakura kwazvo. Parizvino, Bulltech 3D yekudhinda tekinoroji iri kuumbazve shangu indasitiri. Inokurumidza, inoshanda uye yakasarudzika kugadzira mutsva wemakwikwi mukana. 3D yekudhinda tekinoroji inogona kurerutsa yakaoma kugadzirisa maitiro. Kubva pane iyo matatu-mativi data, chigadzirwa chinogona kuwanikwa nekukurumidza munguva ipfupi. Inofananidzwa neyakajairwa kugadzira shangu maitiro, ine hungwaru, otomatiki, kuchengetedza vashandi, inoshanda, yakarurama, uye inochinja. Nekufamba zvishoma nezvishoma kwetekinoroji uye zvigadzirwa, isu ticharamba tichiongorora zvakanyanya mikana pane yekushandisa nhanho.
Dzidzo yehunyanzvi yevadzidzi yekukudziridza kugona kwechizvarwa chinotevera mukushandisa tekinoroji ye3D, nepo ichisimbisa kugona kwevadzidzi uye kuverenga kwesainzi
Kubuda kwetsika uye kugadzira 3D yekudhinda tekinoroji kunounza shanduko huru mukugadzirwa uye kusimudzira kwetsika uye zvigadzirwa zvekugadzira, uye zvakare zvinounza mukana mutsva wekuvandudza. Inotyora muganho pakati pevagadziri nevatengi. Anenge munhu wese anogona kuve mugadziri uye mugadziri. Kudhinda kwe3D kunopa vanhuwo zvavo kugona kugadzira, kuburitsa kurudziro yekuda kweumwe mushandisi, inoshandura ropafadzo dzevanhu vashoma chete munguva yakapfuura kugadzira nekugadzira, uye inoziva yakasarudzika dhizaini yekufunga uye kutaura zvido zvevanhuwo zvavo, uye zvinonyatsoita. kugona kwevanhu vese. Kudhinda kwe3D kunoita kuti huchenjeri hwese uwedzerwe uye ushandiswe, uye hunosimudzira dhizaini yekugadzira yezvigadzirwa zvemagariro kuratidza zvakawanda zvakasarudzika, mukurumbira, uye wakasununguka hunhu.
Iyo 3D yakadhindwa yekuvaka modhi chinhu chidiki chinoratidza zvakatendeka chimiro cheyakavakirwa zano, ichiratidza yakasarudzika pfungwa yechinhu chimwe nechimwe dhizaini, kwete chete inoita kuti mutengi ave nehunyanzvi hwakazara vhezheni yeiyo chirongwa chakatsanangurwa, asi zvakare inogona kuve diki-diki , nekukurumidza uye kwakarurama. Izvo zvinhu zvekugadzira zvinodzoserwa, uye chaiwo mamodheru mamodhi akagadzirwa kuratidza iwo chaiwo uye zvidiki zvidiki.
Kushandisa 3D yekudhinda tekinoroji kune yekutsvagisa uye kusimudzira maitiro e auto zvikamu zvinogona kukurumidza kuongorora kushanda musimboti nekukwanisika kwezvikamu zvakaomarara, izvo zvinongoponesa nzira yekukura kweforoma, asi zvakare zvinoderedza nguva nemari yekudyara. Iyo yekutsvagisa uye kusimudzira kutenderera kwetsika auto zvikamu zvinowanzo kuve anopfuura mazuva makumi mana, nepo 3D kudhinda kunogona kupedzisa kusimudzira uye kuongorora maitiro ezvikamu mumazuva 1-7, izvo zvinogona kuvandudza zvakanyanya kutsvagisa nekusimudzira kugona kwezvigadzirwa zvitsva. Zvakare, hapana chakuvhuvhu chinodikanwa mukugadzirisa zvikamu ne 3D kudhinda, izvo zvinogona kuchengetedza yakawanda mari. Parizvino, kudhinda kwe3D kunoshandiswa mumotokari R & D uye kuyedzwa kugadzirwa kwezvikamu uye zvinhu zvinomisikidzwa mumotokari grilles, mota madhibhodhi, mapaipi ekugadzirisa mweya, manifolds ekudya, injini hood, zvikamu zvekushongedza, mwenje yemota, matai emota, nezvimwe.
3D yekudhinda tekinoroji inopa nzira itsva dzekugadzira uye nzira dzekugadzira dzakasiyana siyana dzekugadzira minda, uye shanduko nyowani dzinokonzerwa neizvi zvishoma nezvishoma dzinova musoro unopisa wekutarisirwa nevanhu. Nekudzika-kushanda kweiyo 3D nzira dzekugadzira yekudhinda, hunyanzvi hwepurasitiki huchafemerwa kuburitsa mafomu matsva nemitauro, kuvimba nemakomputa senzvimbo yekugadzira, inoenderana nekusimudzira indasitiri.
Iine kukurumidza kukura kwe 3D kudhinda tekinoroji, inosanganisirwa nekushandisa kwemakomputa tekinoroji, dhizaini dhizaini uye maitiro ekuumbwa kweiyo chaiyo castings, kune dhizaini uye kugadzira kwekumanikidza kuumbwa, wakisi kuumbwa kuumbwa, goko kugadzira, yakakosha kugadzira, nezvimwe, ndizvo akashandiswa kugadzirwa nemazvo castings. Izvo zvakaunza shanduko huru. Kubatsira kukuru kwe 3D kudhinda nemazvo kukanda kwakanyanya kuenzana kurongeka uye kumeso kupera, saka basa rekushandisa rinogona kuderedzwa. Ingo siya zvishoma machining mvumo pane izvo zvikamu zvine yakakwira zvinoda, kana kunyange zvimwe castings. Iyo yekukuya uye yekupukuta mvumo inogona kushandiswa pasina mehendi kugadzirisa. Zvinogona kuonekwa kuti nzira yekudyara yekudyara inogona kuponesa yakawanda yemuchina chishandiso chishandiso uye kugadzirisa murume-maawa, zvakanyanya kuchengetedza simbi mbishi zvinhu, uye zvine nharaunda.
Iyo prototype idanho rekutanga rekuona kugona kwechigadzirwa nekugadzira muyenzaniso pamberi pekugadzirwa kwakawanda. Iyo inoshandiswa kutarisa kana chigadzirwa chichienderana nezvinodiwa dhizaini. Iyo yakanakira mukana weiyo prototype 3D purinda ndeyekuti inogona kuunza zvakananga zvikamu zvechero chimiro kubva kumakomputa giraidhi data pasina michina kana chero mafomu, nokudaro ichipfupisa zvakanyanya chigadzirwa chekuvandudza kutenderera, kunatsiridza kugadzirwa uye kudzikisa mutengo wekugadzira. Zvichienzaniswa neyakajairwa tekinoroji, mutengo unoderedzwa nekusiya yekugadzira tambo, uye iyo marara ezvinhu akaderedzwa zvakanyanya.